Hotels For Sale and For Rent in Batemans Bay, New South Wales
Uhlu Lwezakhiwo: Izakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi Amahhotela I-New South Wales Batemans Bay
I-Irt The Clyde Retirement Village - Batemans Bay - Nsw
I-IRT Idolobhana laseClyde Retirement Village - eBatemans Bay - I-NSWLisendaweni esogwini lweBateman's Bay, uzothokozela ukunethezeka nokusebenziseka kwalo mphakathi onamahhotela.Join umphakathi wethu wokuzilibazisa wabantu abacabhile abaneminyaka yobudala engama-55. Khetha kusuka ku-29 amakamelo okulala amabili nantathu anendawo yangasese ...
buka Amahhotela eshicilelwe Izinyanga 2 edlule
A ihhotela isikhungo esihlinzeka ngendawo yokuhlala ekhokhelwayo ngesikhashana esifushane. Izindawo ezinikeziwe zingasukela kumatilasi asezingeni eliphansi kwigumbi elincane kuya kumakamelo amakhulu anamabhede amakhulu, aphezulu, umgqoko wokugqoka, ifriji nezinye izinto zasekhishini, izihlalo eziphakeme, umabonakude we-Flatscreen nezindawo zokugeza ze-en-suite. Amahhotela amancane, anenani eliphansi anganikeza kuphela izinsizakalo zezivakashi nezibonelelo eziyisisekelo. Amahhotela amakhulu, anamanani entengo ephezulu anganikezela ngezindawo zokwengeza zabavakashi ezifana nedamu lokubhukuda, isikhungo sebhizinisi (ngamakhompyutha, amaphrinta nezinye izinto zehhovisi), ukunakekela izingane, izinkomfa nezindawo zomcimbi, izinkantolo ze-tennis noma i-basketball, indawo yokuzivocavoca, izindawo zokudlela, indawo yosuku nezenhlalo imisebenzi yokusebenza. Amakamelo wehhotela ajwayele ukubalwa (noma aqanjwe kwamanye amahhotela amancane nama-B & B) ukuvumela izivakashi ukukhomba igumbi labo. Amanye amahhotela, amahhotela aphezulu anamakamelo ahlotshisiwe. Amanye amahhotela anikela ngokudla njengengxenye yegumbi nokulungiswa kwamabhodi. E-United Kingdom, ihhotela liyadingeka ngokomthetho ukuthi lihambise zonke izivakashi ukudla neziphuzo ngaphakathi kwamahora athile abekiwe. EJapan, amahhotela we-capsule ahlinzeka igumbi elincane elungele kuphela ukulala kanye nezindawo zokugezela ezabiwayo.
IBatemans Bay yidolobhana esifundeni saseSouth Coast esifundeni saseNew South Wales, e-Australia. IBatemans Bay iphethwe ngumkhandlu we-Eurobodalla Shire. Leli dolobhana lisogwini lwesichotho esakhiwe lapho umfula iClyde uhlangana nolwandle oluseNingizimu Pacific. IBatemans Bay itholakala kuPrinces Highway (Highway 1) amakhilomitha angama-280 (170 mi) ukusuka eSydney kanye nama-760 km (470 mi) ukusuka eMelbourne. ICanberra itholakala cishe ngamakhilomitha ayi-151 (94 mi) entshonalanga yeBatemans Bay, ngeKing Highway. Ekubalwa kwabantu kowezi-2016, iBatemans Bay yayinabantu abangu-11,294. Indawo enkulu yasemadolobheni ezungeze iBatemans Bay nayo ifaka i-Long Beach, iMaloneys Beach kanye nogwadule osogwini olusuka eningizimu eRosedale bekunabantu abangu-16,485 ngoJuni 2018. Kuyidolobha lasolwandle eliseduzane naseCanberra, elenza iBatemans Bay yindawo yokuvakasha evamile yezakhamizi. Inhlokodolobha Yezwe Lase-Australia. Ngokuma komhlaba, isendaweni efinyelela kude eningizimu yeSydney Basin. IBatemans Bay nayo iyindawo evamile yokuthatha umhlalaphansi, kodwa isiqalile ukuheha imindeni emisha ifuna izindlu ezingabizi kanye nendlela yokuphila yasolwandle evuselelekayo. Eminye imikhakha yasendaweni ifaka phakathi ukulima i-oyster, amahlathi, ezokuvakasha kanye nezinsizakalo zokuthengisa.
INew South Wales (efushanisiwe njengeNSW) iyisifundazwe esisogwini olusempumalanga ye-Australia. Umngcele weQueensland ngasenyakatho, iVictoria ngaseningizimu, neSouth Australia ngasentshonalanga. Ugu lwayo lugudla uLwandle lwaseTasman ukuya empumalanga. I-Australia Capital Territory iyindawo eboshwe ngaphakathi kombuso. Inhlokodolobha yesifundazwe iNew South Wales yiSydney, okubuye idolobha elinabantu abaningi kakhulu e-Australia. NgoDisemba 2018, inani labantu baseNew South Wales babedlula izigidi ze-8, okwenza kwaba yisifundazwe sase-Australia esinabantu abaningi kakhulu. Ingaphansi kwengxenye eyodwa kwezintathu yabantu bakulesi sifundazwe, abayizigidi ze-5.1, bahlala endaweni enkulu yaseSydney. Izakhamizi zaseNew South Wales zibizwa ngokuthi yiNew South Welshmen.I-Colony of New South Wales yasungulwa njengekholoni yenhlawulo e1788. Imvelaphi yayihlanganisa ngaphezu kwengxenye yezwekazi lase-Australia nomngcele wayo osentshonalanga obekwe e-129th meridian empumalanga e-1825. Leli koloni lalihlanganisa nezindawo ezinesiqhingi zaseNew Zealand, iVan Diemen's Land, Lord Howe Island, neNorfolk Island. Ngekhulu le-19th, iningi lendawo yamakholoni lavinjezelwa ukwakha amakoloni aseBrithani ahlukile agcina aba yiNew Zealand kanye nezindawo ezahlukahlukene nezindawo zase-Australia. Kodwa-ke, iSwan River Colony ayikaze iphathiswe njengengxenye yeNew South Wales. I-Lord Howe Island ihlala iyingxenye yeNew South Wales, kuyilapho iNorfolk Island isiphenduke insimu yobumbano, njengoba nezindawo manje sezaziwa ngokuthi yi-Australia Capital Territory neJervis Bay Territory.